Ozi Ọma Luk Dere 20:1-47
A jụrụ Jizọs onye nyere ya ikike o ji arụ ọrụ (1-8)
Ihe atụ gbasara ndị ọrụ ubi gburu mmadụ (9-19)
Chineke na Siza (20-26)
A jụrụ Jizọs ajụjụ gbasara mbilite n’ọnwụ (27-40)
Kraịst ọ̀ bụ nwa Devid? (41-44)
Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha kpachara anya maka ndị odeakwụkwọ (45-47)
20 Otu ụbọchị, mgbe ọ nọ na-ezi ndị mmadụ ihe n’ụlọ nsọ ma na-ezisa ozi ọma, ndị isi nchụàjà na ndị odeakwụkwọ na ndị okenye bịara 2 sị ya: “Gwa anyị, Ebee ka i si nweta ikike i ji eme ihe ndị a? Ma ọ bụ, ònye nyere gị ikike ime ihe ndị a?”+ 3 Ya asị ha: “M ga-ajụkwa unu otu ajụjụ, unu zaakwa m: 4 Baptizim Jọn mere ndị mmadụ, ò si n’eluigwe, ka ò si n’aka mmadụ?” 5 Ha gwara ibe ha, sị: “Ọ bụrụ na anyị asị, ‘O si n’eluigwe,’ ọ ga-asị, ‘Gịnị mere na unu ekwetaghị ihe o kwuru?’ 6 Ma ọ bụrụ na anyị asị, ‘O si n’aka mmadụ,’ ndị a niile ga-atụ anyị nkume, n’ihi na ha kweere na Jọn bụ onye amụma.”+ 7 N’ihi ya, ha sịrị na ha amaghị ebe o si. 8 Jizọs wee sị ha: “M gaghịkwa agwa unu ebe ikike m ji eme ihe ndị a si.” 9 O wee malite imere ìgwè mmadụ ahụ ihe atụ, sị: “Otu nwoke kọrọ ubi vaịn+ ma nyefee ya n’aka ndị ọrụ ubi, gaakwa mba ọzọ, nọtee aka.+ 10 Ma mgbe oge e ji aghọ mkpụrụ vaịn ruru, o zipụrụ otu ohu ya ka ọ gakwuru ndị ọrụ ubi ahụ ka ha nye ya ụfọdụ n’ime mkpụrụ si n’ubi vaịn ahụ. Ma, ndị ọrụ ubi ahụ tikasịchara ya ahụ́, chụlaa ya n’enyeghị ya ihe ọ bụla.+ 11 Ma o zigakwaara ha ohu ọzọ. Ha tikwara onye nke ahụ ihe ma menye ya ihere, chụlaa ya n’enyeghị ya ihe ọ bụla. 12 O zigakwara onye nke atọ. Ha merụkwara ya ahụ́ ma chụlaa ya. 13 Onye nwe ubi vaịn ahụ wee sị, ‘Gịnị ka m ga-eme? M ga-eziga ọkpara m m hụrụ n’anya.+ Ikekwe, ha ga-akwanyere yanwa ùgwù.’ 14 Mgbe ndị ọrụ ubi ahụ hụrụ ya, ha gwara ibe ha, sị, ‘Ọ bụ onye a ga-eketa ubi a. Ka anyị gbuo ya, ka ihe ọ ga-eketa bụrụzie nke anyị.’ 15 Ha wee kpọpụ ya n’ubi vaịn ahụ, gbuo ya.+ Gịnịzi ka onye nwe ubi vaịn ahụ ga-eme ha? 16 Ọ ga-abịa gbuo ndị ọrụ ubi a ma nyefee ndị ọzọ ubi vaịn ahụ.” Mgbe ha nụrụ ihe a, ha sịrị: “Tụfịakwa!” 17 Ma o legidere ha anya, sị: “Gịnịzi ka ihe a e dere n’Akwụkwọ Nsọ pụtara: ‘Nkume ndị na-arụ ụlọ jụrụ aghọọla nkume ji ụlọ?+ 18 Onye ọ bụla nke dara n’elu nkume a ga-akụri.+ Nkume a ga-egwerikwa onye ọ bụla ọ dakwasịrị.” 19 Ndị odeakwụkwọ na ndị isi nchụàjà chọrọ ijide ya n’oge ahụ, n’ihi na ha matara na o bu ha n’obi mee ihe atụ ahụ.+ Ma ha tụrụ ìgwè mmadụ ahụ egwu. 20 Ma, ebe ha na-achọ otú ha ga-esi nweta Jizọs, ha kwụrụ ụfọdụ ndị ụgwọ na nzuzo ma ziga ha ebe ọ nọ ka ha mee ka hà bụ ndị ezigbo mmadụ, ka ha jiri ihe ọ ga-ekwu mata ya n’ọnyà,+ iji nyefee ya n’aka ndị ọchịchị nakwa n’aka gọvanọ.* 21 Ha wee sị ya: “Onye Ozizi, anyị ma na ihe ị na-ekwu na ihe ị na-ezi bụ eziokwu, ị naghịkwa ele mmadụ anya n’ihu, kama ihe ị na-akụzi banyere Chineke bụ eziokwu. 22 È kwesịrị ịkwụ Siza ụtụ isi ka ọ̀ bụ na e kwesịghị?” 23 Ma ọ matara na ha ji aghụghọ bịa. O wee sị ha: 24 “Gosinụ m otu mkpụrụ ego dinarịọs.* Isi ònye na aha ònye dị na ya? Ha asị: “Ọ bụ nke Siza.” 25 Ya asị ha: “N’ihi ya, kwụọnụ Siza ihe Siza,+ ma kwụọnụ Chineke ihe Chineke.”+ 26 Ha ejilighị ihe o kwuru nweta ya n’ihu ìgwè mmadụ ahụ. Kama, ha gbara nkịtị n’ihi na ihe ọ zara juru ha anya. 27 Ma, ụfọdụ ndị Sadusii, ndị na-asị na mbilite n’ọnwụ adịghị,+ bịara sị ya:+ 28 “Onye Ozizi, Mosis dere, sị, ‘Ọ bụrụ na nwanne mmadụ lụrụ nwaanyị ma nwụọ n’amụtaghị nwa, nwanne ya nwoke kwesịrị ịlụwa nwunye ya, sikwa n’aka ya mụtara nwanne ya nwoke nwa.’+ 29 Ma, e nwere ụmụnne asaa. Nke mbụ lụrụ nwaanyị ma nwụọ n’amụtaghị nwa. 30 Onye nke abụọ lụụrụ ya, nwụọkwa. 31 Otu ihe ahụ mekwara onye nke atọ. Otú ahụ ka o mere ha asaa. Ha niile nwụchara n’amụtaghị nwa. 32 N’ikpeazụ, nwaanyị ahụ nwụkwara. 33 A kpọlite ha n’ọnwụ, ònye n’ime ha ka ọ ga-abụ nwunye ya, ebe ọ bụ na mmadụ asaa ahụ lụchara ya?” 34 Jizọs asị ha: “Ụmụ nke oge a* na-alụ nwunye, a na-ekekwa ha di. 35 Ma, ndị e weere ka ndị ruru eru ịdị ndụ n’oge ahụ na ndị a ga-akpọlite n’ọnwụ agaghị alụ nwunye, a gaghịkwa eke ha di.+ 36 N’eziokwu, ha agaghịkwa anwụ ọzọ, n’ihi na ha ga-adị ka ndị mmụọ ozi. Ebe ha ga-esikwa n’ọnwụ bilie, ha ga-abụ ụmụ Chineke. 37 Mgbe Mosis dere gbasara osisi ogwu na-ere ọkụ, o kwuru na a ga-akpọlite ndị nwụrụ anwụ. Ọ kpọrọ Jehova* ‘Chineke Ebreham na Chineke Aịzik na Chineke Jekọb.’+ 38 Ọ bụghị Chineke nke ndị nwụrụ anwụ, kama ọ bụ nke ndị dị ndụ, n’ihi na n’anya ya, ha niile dị ndụ.”+ 39 Ụfọdụ n’ime ndị odeakwụkwọ ahụ asị ya: “Onye Ozizi, i kwutere ya,” 40 n’ihi na obi akaghịzi ha ịjụ ya ajụjụ ọ bụla. 41 O wee sị ha: “Gịnị mere ndị mmadụ ji asị na Kraịst bụ nwa Devid?+ 42 N’ihi na Devid kwuru n’akwụkwọ Abụ Ọma, sị, ‘Jehova* gwara Onyenwe m, sị: “Nọdụ ala n’aka nri m 43 ruo mgbe m ga-eme ka ndị iro gị bụrụ ihe i ji agbakwasị ụkwụ.”’+ 44 Ebe ọ bụ na Devid kpọrọ ya Onyenwe m, oleezi otú o si bụrụ nwa ya?” 45 Ka mmadụ niile nọ na-ege ntị, ọ gwara ndị na-eso ụzọ ya, sị: 46 “Kpacharanụ anya maka ndị odeakwụkwọ. Ọ na-atọ ha ụtọ iyi uwe mwụda na-agagharị, ọ na-atọkwa ha ụtọ ka a na-ekele ha n’ọma ahịa, nakwa ka ha na-anọ n’oche ihu* n’ụlọ nzukọ nakwa n’isi oche ná nri anyasị.+ 47 Ha na-anara ụmụ nwaanyị di ha nwụrụ ihe niile ha nwere,* na-ekpekwa ogologo ekpere ka ndị mmadụ hụ ha. Ikpe a ga-ama ha ga-akarị nke ndị ọzọ.”
^ Na Grik, “n’ikike gọvanọ.”
^ Na Grik, “Ha na-eripịa ụlọ ụmụ nwaanyị isi mkpe.”